Umhlalaphantsi ka-Ute (eGeorgenberg), indawo yokuhlala yeholide 60 qm
UCarmen unezimvo eziyi-150 zezinye iindawo.
Apartment 60 sqm
Ziva iiholide ezimangalisayo kwiHlathi lasePalatinate eliPhezulu kunye neeyure ezizolileyo kwiindawo zethu zeeholide eziqaqambileyo nezinencasa. Malunga ne-60m² ikunika iholide ongasoze ulibaleke. Unegumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala / igumbi lokulala elinomabonakude wescreen esicaba, iikhabhathi kunye nesofa. Indawo yokutyela kunye nekhitshi zixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, imicrowave, iketile, ioveni, isitovu, itoaster, umenzi wekofu kunye nezitya ezipheleleyo. Igumbi lokuhlambela lineshawa, indlu yangasese kunye nesinki. Ilinen yokulala, iithawula, i-WiFi yamahhala, indawo yokupaka kunye nokucoca imihla ngemihla zibandakanyiwe kwixabiso.
Molweni nonke, indlu yethu yeendwendwe ikwindawo ezolileyo, efihlakeleyo kwaye yindawo yokuphumla kwabancinci nabadala. Ukuthatha iholide nathi kuthetha ukonwabela iintsuku zeholide ezingakhathaliyo, ukuphumla kunye nokuphumla, ukuvumela ingqondo yakho ibhadule, uzive wonwabile kusapho lwakho, ungenzi ngaphandle kwezinto eziqhelekileyo, kodwa kwangaxeshanye uhlangabezana nezinto ezintsha nokunye okuninzi. m.
Kwindlu enkulu kukho indawo yokutyela kunye neyokuphumla enegadi enkulu, eqaqambileyo yasebusika, apho unokufumana isidlo sakho sakusasa, ikofu kunye nekhekhe kunye nesidlo sakho sangokuhlwa.
Singabamkeli behlabathi bebhayisikile eUpper Palatinate eqinisekisiweyo.
Siyavuya kuba ukhethe le ndawo.
Thina, OBS OnlineBuchungService GmbH, siya kukuvuyela ukukuxhasa ekucwangciseni iholide yakho kwaye sicacise imibuzo yakho kunye nomninimzi.
Xa ubhukisha nge-AirBnB, i-OBS OnlineBuchungService GmbH isebenza kuphela njenge-arhente hayi umamkeli wakho othe ngqo kunye neqabane lakho lekhontrakthi kwindawo yokulala ebusuku.
Uya kufumana iinkcukacha zoqhagamshelwano zomnini wakho kunye neqabane lakho lesivumelwano kunye nesiqinisekiso sokubhukisha esahlukileyo.
Iqela le-OBS OnlineBuchungService GmbH
Thina, OBS OnlineBuchungService GmbH, siya kukuvuyela ukukuxhasa ekucwangciseni iholide yakho kwaye sicacise imi…